हरेक बिहान यी मन्त्र जपेर सुरु गर्नुहोस् गणेश भगवानको पूजा, तपाईंको सम्पूर्ण सोचेका इच्छा पुरा हुनेछन् ! - Mitho Khabar
हरेक बिहान यी मन्त्र जपेर सुरु गर्नुहोस् गणेश भगवानको पूजा, तपाईंको सम्पूर्ण सोचेका इच्छा पुरा हुनेछन् !
October 17, 2020 mithokhabarLeaveaComment on हरेक बिहान यी मन्त्र जपेर सुरु गर्नुहोस् गणेश भगवानको पूजा, तपाईंको सम्पूर्ण सोचेका इच्छा पुरा हुनेछन् !
तपाईहरु जो कोहीलाई थाहा भएको कुरा हो की केही कार्य गर्नुभन्दा पहिला गणेश भगवानकै पूजा गरिन्छ । अब शुभकार्यको बेला त यसो गरिन्छ भने आफ्नो जीवनको अर्को नयाँ दिन अर्थात हरेक दिनको बिहान झनै कति महत्वपूर्ण छ तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । यसैले बिहानको शुभ समयमा काम थाल्नुभन्दा पहिला भगवान गणेशको पूजा गर्नुहोस् । हुन त मंगलबार भगवान गणेशको विशेष दिन हो । तर भगवान गणेशलाई सिद्धि प्राप्तिका भगवान मानिएकाले हरेक दिन बिहान पूजा गर्नु राम्रो छ ।
हिन्दु धर्म अनुसार हरेक साताको हरेक एकदिन कुनै भगवानको नाममा ब्रत बस्ने गरिन्छ । त्यसैगरी मंगलबार पनि धेरैजना गणेश भगवानको प्रार्थना गरि ब्रत बस्ने दिन । सबै किसिमका सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रुदमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मङ्गलबारको ब्रत एकदमै उत्तम मानिन्छ । यो ब्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । मंगलबारको ब्रतबाट मङ्गल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन पुग्छ । यही फल प्राप्तिका लागि भगवान गणेशलाई हरेक दिन आराधाना गर्नु उपयुक्त छ ।
बिहान उठेर स्नान गरी शुद्ध भएपछि रातो कपडा धारण गरी ’ॐ भौमाय नमः’ ५ माला जप गर्नुपर्दछ । गणेश भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ । पूजा गर्दा रातो फूल, फल, तामा, नरिवल आदि दान गर्नुपर्दछ । यो ब्रत कमसेकम २१ वटा मङ्गलबारसम्म लिने प्रचलन छ । सकिन्छ भने जीवनभरि नै लिए अझ राम्रो मानिन्छ। यस व्रतमा गहुँ र सख्खरको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, रातो कपडा लगाउनु पर्दछ । एक छाक अलिनो भोजन गर्नु पर्दछ ।
ब्रतको दिन के गर्ने ?
विहानको समयमा मोमबत्ती या दीप बाल्नुहोस् । विहानको ध्यान गर्नुहोस् । केही धार्मिक ग्रन्थहरु पढेर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुहोस् । जब बेलुका घर पुग्नुहुन्छ । हात खुट्टा धुनुहोस् । कपडा फेर्नुहोस् अनि चोखो खाना (प्रसाद) बनाउनुहोस् । जस्तै हलुवा, खिरलगायतका खाना । खाना (प्रसाद) प्रेम र सद्विचार अथवा कुनै मन्त्र उच्चारण गर्दै बनाउनुहोस् । यो मनन गर्नुहोस् कि, ब्रत या अन्य बेला खाना बनाउँदा पूर्णरुपमा त्यसमा ध्यान दिनुहोस् र प्रशन्न मन लिएर बनाउनुहोस् अनि मात्र खानाखाने मान्छेको आत्मा तृप्त हुन्छ ।
जब खाना (प्रसाद) तैयार हुन्छ, ध्यान अथवा पूजा गर्ने ठाउँमा फलफूल र प्रसाद राख्नुहोस् ।
पूजास्थानमा दीप, मोमबत्ती या अगरवत्ती बाल्नुहोस् । प्रकाशलाई स्वयं भगवानको उपस्थिति मानिन्छ । यसले ज्ञान र बुद्धि प्रदान गर्छ । फूल, फल र सुगन्ध विश्व, ब्रम्हाण्ड शक्तिको भेट मानिन्छ । त्यसपछि परिवार, साथीभाइ वा एक्लै बसेर भगवानको आरती गर्न सकिन्छ । त्यस समयमा भागवत् गीता लगायतका आफ्नो अनुसारको धार्मिक ग्रन्थको अध्याय पढ्न सक्नुहुन्छ । यातफेरि भजन गाउँदै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ
गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित…..
मकवानपुरको भीमफेदीमा टाटासुमो दुर्घटना: दुइजनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ !
June 15, 2021 Nirmal Gautam
भगवान श्रीकृष्ण महान वाणीहरु
यी अंगमा कोठी छन् भने जति कमाए पनि टिक्दैन पैसा !
January 30, 2020 February 4, 2020 mithokhabar
नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह ? को हुन् उनका हुनेवेला वेहुला ?
पत्नीलाई रानी बनाएर राख्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने पुरुषले
खु’ट्टा कालो भएर हैरान हु’नुहुन्छ ? उसोभए चिनीको यो उपाय अपनाउनुहो’स् !
एसइईको मूल्यांकनमा गर्ने मापदण्ड तोकियो,यसरि दिनु पर्नेछ शिक्षक ले नम्बर,धेरै अंक दिए कारण खुलाउनुपर्ने
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ
मृ-त्युद’ण्डको सजाय सुनाए-पछि किन कलमको निभ भाँच्छन् न्यायाधीश ?
कम्मर भन्दा तल नचल्ने भयो तर उनले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए
दिउँसो सुत्ने बानी छ ? होस गर्नुस् यस्तो हुन सक्छ
सुर्खेतमा अचम्मको जुम्ल्याहा बच्चाको जन्म भगवानको स्वरुप हुन् सक्ने, सक्दो सेयर गरौ
मानिसका यस्ता बानीले हामीलाई सानैमा बुढो देखाउछ
यि कारणले हुन् किड्नी बिगार्ने मानिसका यस्ता बानी : समयमै जानकारी लिनुहोस्
बिहे गरेको २ महिनापछी दलित भन्दै श्रीमानले या’तना दिएकी श्रीमती भन्छिन् : ‘मेरो शरीर संग खेल्न मात्र बिहे गरेको रहेछ’ (भिडियोसहित)
अर्को वर्षसम्म फेसबुक म्यासेन्जर प्रयोग नगर्न विज्ञको आग्रह, कारण यस्ताे छ
बच्चाको तालुमा प्वाल परेपछि आत्तिँदै अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा सबैले डाक्टर नै भए चकित
अब बालबालिकालाई पनि शैक्षिक भत्ता दिन। कति छ त मासिक भत्ता?
अस्ताए जापानमा एक नेपाली! मनमा अलिकति दया भए (R.I.P) लेखेर शेयर गरिदिनु होला!
भोक : भात खान दिनहुँ हिँडेर थापाथली आउँछन् मीठू र उनका छोराछोरी (फोटोसहित), दुइ मिनेट समय दिएर अवश्य प’ढ्नुहोला
बिज्ञानले भन्छ – एकल जीवन जिउँनेहरु सफल र सुखी हुन्छन्